Umbuzo ukuthungwa kushicilelwe
unyaka 1 9 edlule #911 by RUN974
Bonjour, ngiyabhekana nobunzima, ngiyayithola yini i-A330 prologue de chez BBS Ngabe ngifake imidwebo ehluleka ukuphuma ngokugcwele? Ukuthi le nkinga ivele yenziwe nge-PMDG 777. Siyabonga.
unyaka 1 9 edlule #912 by Gh0stRider203
Le Forum isingesiNgisi kuphela. Kuforamu ye-French Rikooo, landela lesi sixhumanisi: www.rikoooo.com/fr/forum/
unyaka 1 9 edlule #934 by DRCW
Izinguqulo zenguqulo yenguqulo FSX vous useisez. Izakhi zokwenziwa, ezi-peet que vous exécutiez FSX I-Delux et que SP1 / SP2 ou l'accélération ne soit pas ukufaka. Uma sisebenzisa uhlelo olusetshenziselwa ukuvota, i-vous risquez d'avoir des problèmes avec votre carte graphique, ou vous avez trop d'add-ons man fonctionnty en même temps. I-Faites le moi savoir, i-merci
Isikhathi ukudala page: 0.162 imizuzwana